Al Shabaab Oo Weerar Rogaal Celis Ah Ku Qaaday Deegaanka Bariire.
Monday October 02, 2017 - 10:05:23 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaanka Bariire oo hoos yimaad degmada Afgooye.
Xalay fiidkii ayay ciidamada Xarakada Al Shabaab weeraro xooggan ku qaadeen saldhigyada Maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ku leeyihiin deegaanka kadibna waxaa halkaasi ka billaawday dagaallo culus.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in dagaalyahanada Al Shabaab ay duqeeyeen saldhigyada Maleeshiyaadka Mareykanku tababaray kadibna ay gudaha usoo galeen deegaanka, Jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay ayaa laga maqlayay Bariire iyo deegaannada hoos yimaad.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Maleeshiyaadka DF-ka ay isaga firxadeen saldhigyadii ay kulahaayeen deegaanka waxaana markale Bariire la wareegay ciidamada Xarakada Al Shabaab waloow saaka aroortii ay dib uga gurteen.
Jimcihii lasoo dhaafay Bariire waxaa ka dhacay weerar weyn oo lagu dilay 95 askari oo katirsan Maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee dowladda Mareykanka ku tababartay garoonka diyaaradaha Balidoogle.